Nagarik Shukrabar - साहित्य
शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : ३१
कथा : प्रार्थना
सानेले दुवै हात जोड्यो र सरस्वती माताको प्रार्थना गर्दै मनमनै भन्यो– “सरस्वती माता मलाई आमाले भनेजस्तो वरदान चाहि“दैन । म आफै“ पढ्न र ठूलो मान्छे बन्न सक्छु । बरु मेरी आमाका तिघ्राहरु मोटा–मोटा, गाला पुक्क फुलेका र अङ्गुरहरु फर्सीका गट्टा जत्रा बनाइदिनु होला ।”
चाडमा नयाँ पुस्तक निकाल्ने हाेड चले पनि प्रकाशकहरू भने चाड भन्दैमा पुस्तक विक्री नबढ्ने दावी गर्छन् ।
जगदम्बा श्री विजेता शान्तदास मानन्धरकाे प्रश्न ‘ बालबालिकालाइ प्रश्न गर्न सिकाएको खै ?’
प्रश्न सोध्न नै सिकाइँदैन । त्यसैले हाम्रा बालबालिका धेरै जिज्ञासु छैनन् । त्यसको प्रभावले अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक हुने संख्या कम छ । जबसम्म प्रश्न सोध्न सिकाइँदैन, विषयवस्तुलाई फराकिलो ढंगबाट सिकाउन लागिँदैन, उनीहरुको शिक्षा फराकिलो हुन्न । बालबालिकाले प्रश्न सोध्दा झिँजो मान्दै ‘कति सोधी रहेको’ भन्ने जस्तो जवाफ दिनुहुन्न ।
‘कमजोर लेखक पुरस्कार नपाउँदा रुन्छ’
सही लेखकलाई पुरस्कार पाउँदा–नपाउँदा कुनै फरक पर्दैन । ऊ निरन्तर साहित्यिक साधनामा लागिरहन्छ । जो कमजोर र कमसल लेखक हो उसले पुरस्कार नपाउँदा गुनासो गर्छ, रुन्छ ।
‘तथाकथित समालोचकहरुले गर्ने रिभ्यु खासै पढ्दिनँ र मान्दिनँ ’ : सुविन भट्टराई
समालोचना भनेको राम्रो–नराम्रो उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यस्तो चलन छैन । समीक्षा लेनदेनमा आधारित अनि एक्सचेन्ज गरेर लेख्ने प्रवृत्ति छ । तथाकथित समालोचकहरुले गर्ने रिभ्यु खासै पढ्दिनँ र मान्दिनँ पनि ।
कविताका शब्द बुझ्न त्यत्ति धेरै माथापच्ची पनि गर्नु पर्दैन । सरल हुन्छन् शब्दहरु । अपाच्य नै किन नहोस्, चलन चल्तीका शब्द प्रयोग गर्छन् तर ती शब्द घोच्ने काँडाजस्ता तिखा हुन्छन् ।
‘ऐतिहासिक पात्रले मात्र चीनसँग नेपाल जोडिन सक्दैन’
कतिपयलाई नेपाल भन्ने देश नै थाहा रहेनछ । चीन भनेको छिमेकी हो भन्ने लाग्छ । तर आम नागरिक नेपालबारे जानकार छैनन् ।
एक कविको लोभलाग्दो स्टारडम : वाह, क्या क्रेज छ !
नवराज मञ्चमा उभिएर कविता वाचन गर्दाताकाको दृश्य देख्दा लाग्छ, उनी वाचन गरिरहेका छैनन्, हिप्नोटाइज गर्न मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन् ।
‘क्रान्तिका लागि त दस्तावेज लेखिन्छ साहित्य होइन। ‘कसैले साहित्यमा वाद हुन्छ भनेर छुट्टाउँछ भने म त्यसलाई साहित्य मान्दिन । साहित्य जीवन्त हुनुपर्छ । बाँधिएर लेख्ने सहित्य होइन । साहित्य चरित्र हो, वाद होइन ।’ परशु प्रधान
‘नेपाली साहित्य दलालीतर्फ जाँदैछ’
चल्तीका अधिकांश साहित्यकारमा राजनीतिक पार्टी र आइएनजिओले ल्याइदिने मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । तिनमा आफ्नो मौलिक चेत देखिँदैन । राजनीतिक दल नपुगेको ठाउँमा पुगेर नयाँ विचार, दर्शन दिनुपर्ने, उज्यालो छर्नुपर्नेमा उनैको फेरो समातेर हिँड्ने साहित्यकारहरु धेरै देखिन्छन् ।
‘हजुरबुबा बिपीलाई मिस गरिरहन्छु’
१० वर्ष देखि टिचिङ अस्पतालमा सेवारत डाक्टर अपर्णा कोइराला बस्नेत साहित्यमा हामफालेकी छिन् ‘फलेन्, इन् लभ्’ पुस्तकमार्फत् । अंग्रेजी भाषामा लेखिएको यो पुस्तककी लेखिकाको साइनो कोइराला परिवारसँग जोडिए पनि राजनीतिमा कति जोडिएकी छैनन् । पेसाले उनी डर्मिटोलोजिस्ट (छालारोग विशेषज्ञ) हुन् । बिरामीको स्वास्थ्य जाँच्दाजाँच्दै उनले कसरी समाजको नाडी जाँच्न भ्याइन् ? शुक्रवारकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी ।
'यौनलाई अश्लील भन्नु गलत हो'
हामी युवा छँदा समाजले अश्लील मान्ने कुरा अहिले समाजले सहजै स्वीकार्छ । यदि यौनलाई अश्लील भन्नुभएको हो भने पनि गलत हो । के यौन अश्लील हो र ? सान्दर्भिक बनाएर यौनका कुरालाई कलात्मक ढंगले साहित्यमा उतार्दा अश्लीलता हुँदैन ।
साहित्य ०७४ : लेखकभन्दा पाठक अगाडि
नेपाली लेखकभन्दा पाठक निकै अगाडि छन् । केही सर्भेहरूले पाठकभन्दा लेखक कम पढ्छन् भन्ने बताइरहेका छन् । भने जस्तो पुस्तक नपाएर पाठकहरु अंग्रेजी पुस्तकतर्फ ढल्केका पनि छन् । कतिपय लेखकहरू साहित्यमा सहानुभूति लेखेर आफूलाई पाठकमाझ परिचित गराउन खोजिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।
‘छाडा लेख्नु यौन साहित्य होइन’
मानिसको यौन मनोभावनालाई टपक्कै टिपेर कलात्मक शैलीमा कथामार्फत प्रस्तुत गर्ने श्रीरामसिंह बस्नेत पेशाले पत्रकार हुन् । विभिन्न विधाका ८ पुस्तक निकालिसकेका बस्नेत मनोविश्लेषणात्मक कथा लेख्न बढी रुचाउँछन् । अहिले उनको ‘अनुहारहरू’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ । मनोविश्लेषणात्मक यौन कथामा कलम चलाउन रुचाउने बस्नेतले लेखन र अहिलेको शैलीबारे प्रजु पन्तसँग साटेको अनुभव ।
शिवानीकाे प्रश्न : म किन साहित्यकार भनेर चिनिन नहुने ?
किताब लेख्ने घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै रेडियो नाटक लेखेको हो । नाटककारलाई लेखक तथा साहित्यकार नमान्ने हो र ? त्यस्तो आरोप लगाउनेलाई भन्दिनुस् के सेक्सपियर साहित्यकार होइनन् ? मैले सन् २००७ मा नै नाटक लेखेको हो । अनि म किन साहित्यकार भनेर चिनिन नहुने ?
ब्याक बेञ्चर ‘भ्यालेण्टिना’
सगौरव भन्छु म ब्याक बेन्चर थिएँ, र छु । पढाइमा लद्दु भएर होइन । कक्षाको अन्तिम बेञ्चमा बसेर पढ्नुको मज्जा यो छोटेमोटे कथाको काइते चिर्कटोमा अटाउँदैन । तपाईंहरूमध्ये कोही त प्रेममा पर्नु भएकै होला । यदि पर्नु भएको भए राजधानीमा गुड्ने लोकल बसको अन्तिम सिटमा बसेर यात्रा गर्नुको अद्भूत आनन्द तपार्इंहरूको प्रेम जोडीलाई पनि थाहा हुँदो हो ।